IIPORALI: RICKY MUSIC ALBUM REVIEW - IINDABA
Kwirekhodi yakhe yamva nje, uAaron Maine uphonononge iimvakalelo zokudideka kunye nokuqaqamba okulandela ukuphela kobudlelwane. Yirekhodi elinamabhongo elinokulahleka kancinci ngokwalo.
Dlala iTrek Ingoma yeLipstick -IiplangaUkuhamba Ibhendi / Thenga
Ityala lika-Aaron Maine njengeePorchi, zika-2013 Umdaniso ocothayo kwiCosmos , wayegqibelele ukuba umncinci kwaye uthandana nothando okokuqala. I-albhamu yayilulungelelwaniso lwamaphupha e-indie-rock apho uMaine wayecinga ngokuncamisa abahlobo bakhe abasenyongweni kwaye esihla nentombi yakhe ngaphambi kokuba aye kunyango. Yayihlekisa, inyanisekile, kwaye imnandi; kwavakala ngathi sisiqalo somsebenzi othembisayo uncediswa yimvumi ejonge amehlo, eyazi into okanye ezimbini malunga nokubhala iingoma zerock. Iiporchi 'zamva nje, Umculo kaRicky, ngandlela thile ukubuyela kwezo ntsuku zokuqala, nangona kungengenxa yeliso lelitye le-indie. Ukujongana ikakhulu nombono wokuba sothandweni ekupheleni kobudlelwane, irekhodi lelona culo lomculo likhulu lomntu awukhuphileyo uMaine. Naye zange wavakala elahlekile.
Elona candelo linzima lokuphelisa izinto nomntu alisoze libe lolona hluko. Yile nto ilandelayo: Ibhedi yakho ngequbuliso iziva ikhulu kakhulu, kwaye awusenaye umntu wokuvuthela emsebenzini kwaye usele ibhiya enexabiso eliphantsi eluphahleni naye. Yindalo iphela leyo Umculo kaRicky kuvusa. Njengokuba bekufanele ukuba kuthathwe olo luvo lwehlabathi ngesiquphe lenziwa ngendlela engaqhelekanga, amalungiselelo kaMaine apha ngowona mngcipheko wakhe ukuza kuthi ga ngoku. Uyadlala kwi-Auto-Tune, ajike i-mopey tenor yakhe ibe yinto ethe chromatic, kwaye aphumeze ii-synths kunye noomatshini bemigqomo eneepatches ze dissonance. Eyona nto ibalaseleyo kubo, ngo-2016 Iphuli kunye no-2018 Indlu iirekhodi zomdaniso; kokubi kwabo, baziva bengaziwa. Umculo kaRicky yidayari ngakumbi, njengoko ibibhalwe yodwa nasebusuku. Kukwanamabhongo ngakumbi, kungabambeleli kuso nasiphi na isandi okanye imo ethile. Idakumba kwiibhaladi, kwi-slap bass, kwi-beats yendlu, nakwi-synths-wave synths nakwigitare ezintsha. Kodwa ekuzibuyiseleni kwakhona njengombhali wengoma, uMaine khange ayenze ngokwenyani into afuna ukuyithetha okanye into afuna ukuyivakala.
Isinyamezelo esivulekileyo sifundeka njengonobhala owubhalela umntu wakudala kodwa emva koko uphose ngaphambi kokufaka imeyile. Andiqondi ukuba akukho nto ilungileyo / Kodwa ndifuna uyazi / bendikade ndicinga ngawe ngoku, uyakhala, ubetha iimvakalelo. I-Lynchian synths ibhaluni ngasemva, kwaye iMaine ifihle ngasemva komaleko we-Auto-Tune ye-gauzy kunye nokuphazamisa utshintsho lwetempo. Ingoma yeLipstick ivakalelwa ngokulinganayo. UMaine ujonge ngasemva kwiintsuku zokuqala zobudlelwane bakhe. Ukucinga ngawe nabahlobo bakho / Ucinga ngendlu / Ucinga ngento yokwenza izinto, uyacula, ethatha uluhlu lwezinto zengqondo zendlela izinto ezaziziva ngayo ngaphambi kokuba zonke zihambe kakubi. Ngumgca ovuselelayo ogezelwa bubuhle bawo. Utyhafile kwaye uphinda-phinda, ingoma yengoma ye-chintzy bassline ithoba ubunzima bezwi likaMaine.
iingoma ezimbi zebunny yhlqmdlg
Isantya se-glacial sichaza i-albhamu yonke: Imizuzu engama-26 ivakalelwa kabini. Kwaye apho iMaine ijolise kwi-melodrama, amaxesha amaninzi isiphumo sivela njenge-humdrum nje. Umculo kaRicky imida kwi-voyeuristic, njengokukhangela kwincwadana yamanqaku yomntu kunye nokufumana i-doodling engapheliyo endaweni yokutyhileka ngokweemvakalelo. Izinwele zisenokuba lelona xesha lihle kakhulu kwicwecwe le-albhamu, kodwa amazwi-Ukhulule / Uhlala ubhuqa phezulu / Ungandibuyisa-aphikisana nobumnandi bengoma.
Elinye kuphela ixesha uMaine akwazi ukuvuka kwi-funk yakhe nguMadonna, okhazimla njengobusuku edolophini. Ukucula kukaMitski kuthule ilizwi lokuxhasa, kunye nabahlanganisi baphuma ngokungathi ligungqu lobukhosi. Kubi kakhulu yonke enye irekhodi ayinakulingana namandla ayo. Okwangoku, nanjengothotho lwemizobo kunye namaqhekeza, Umculo kaRicky ithatha ubume bealbhamu yokwahlukana. Njengoko ecula kwi-PFB, Ijongeka imbi / Ijongeka imbi / Ijongeka intle kakhulu. Emva kweMadonna, yeyona ngoma ye-albhamu, kwaye iyanqunyulwa emva kwemizuzwana engama-33. Njengokuba nabani na onyamezele intliziyo eyaphukileyo enokungqina, ngamanye amaxesha akukho nto yimbi inokuthethwa.
mf doom wazalwa unje
tove lo lady iinkuni albhamu
ujim jarmusch tom ulindile
akukho thando olunzulu lwewebhu